RASMI: UEFA oo ganaax dul dhigtay Alexandre Lacazette… (Imisa kulan ayuu ka maqnaan doonaa kooxda Arsenal?) – Gool FM
(Yurub) 22 Feb 2019. Xiriirka kubada cagta qaarada yurub ee “UEFA” ayaa shaaca ka qaaday inay dul dhigeen weeraryahanka kooxda Arsenal ee Alexandre Lacazette.
Qoraal rasmi ah ee kasoo baxay “UEFA” ayaa lagu sheegay in Alexandre Lacazette la dul dhigay ganaax saddex kulan ah, kadib markii uu qalad anshaxa kubada cagta ka baxsan ku sameeyay mid ka mid ah xidigaha kooxda Borisov.
Alexandre Lacazette ayaa seegi doona kulnka soo aadan ay ka ciyaari doonto kooxda Arsenal wareega 16-ka ee tartanka UEFA Europa League, kadib markii lagu ganaaxay mudo dhan saddex kulan ah.
Lacazette ayaa qaatay kaarka casaanka ee toos ah kulankii lugta hore wareega 32-da koox ee tartanka UEFA Europa League ay kula ciyaareen kooxda Borisov 14-kii bishan Febraayo.
Laacibka reer France ayaa seegi doona labada kulan ay kula ciyaari doonaan kooxda Rennes wareega 16-ka ee tartanka UEFA Europa League, sidoo kale kulanka lugta hore wareega siddeeda ee tartankan, waa hadii ay Gunners u gudubto wareega xiga ee tartankan.